नेपाली व्यवसायीले विदेशमा कम्पनी खोल्दा के आपत्ति ? | चितवन पोष्ट
नेपाली व्यवसायीले विदेशमा कम्पनी खोल्दा के आपत्ति ?
नेपालमा केही दिनअघि विदेशमा नेपालीको यति लगानी छ, बैँक खाता छन् भन्ने समाचार आयो । अहिले यो त्यसै सेलाएर गयो । विदेशमा जसको लगानी छ, खाता छ भनियो, नाम आयो कसैलाई आश्चर्यमा पारेन । त्यहाँ खाली केही व्यवसायीको नाम थियो । व्यवसायीको विदेशमा लगानी र खाता हुनु अहिले सामान्य कुरा हो । हजारौँ नेपालीका अहिले विदेशमा खाता छन् । कहिलेकाहीँ त नेपालका गाउँको हुलाकमा समेत विदेशी बैँकले पठाएको खाता विवरण उल्लेखित पत्र पुग्ने गर्छ ।
विनय पढ्न अमेरिका आएका थिए । यहाँ पैसा कमाउन सकिने अवसर देखे, लगानी गरे । त्यसबेला उनीसँग अमेरिका स्थायीरुपमा बस्न पाउने विद्यार्थी भिसााबाहेक कुनै कागजात थिएन । तर, अवसर देखेका थिए, टेक्ससमा कम्पनी खोलेर व्यवसाय गरे । केही वर्षमै उनले १४÷१५ करोड रुपैयाँ कमाइ गरेर नेपाल पठाए । त्यहाँ जग्गा जमिन किने । टेक्ससमा अहिले पनि उनका थुप्रै कम्पनी र व्यवसाय छन् । उनको लगानी विस्तार गर्ने क्रम रोकिएको छैन । नेपालमा घरजग्गामा लगानीबाट माथि उठेर नयाँ कम्पनीमा पनि उनले लगानी सुरू गरेका छन् । यो ४० वर्ष पनि नपुगेका नेपाली युवाको सफलताको कथा हो ।
टेक्ससमा यस्ता थुप्रै नेपाली भेटिन्छन् । विद्यार्थीका रुपमा आएर अमेरिकामा दुःख गरेर कमाएको पैसाको लगानीबाट एक सयाभन्दा बढीका स्टोर मालिक भएकाहरु पनि छन् । उनीहरुका यहाँ कयौँ व्यवसाय र कम्पनी छन् । लगानी अमेरिकामा मात्र सीमित छैन । नेपाल पनि लगेका छन् ।
अमेरिकाको लसएञ्जसमा वेदभक्त जोशी परिवारले स्थायी बसोबास गरेको करिव ४० वर्ष भयो । उनका छोरा किरणभक्त जोशी हलिउड सहर लसएन्जलसमै हुर्किए, बढे, पढे । उनको अमेरिकामा एनिमेसन स्टुडियो छ । खोज पत्रकारिता केन्द्र नेपालले विदेशी संस्था आईसीआईजेसँग मिलेर सार्वजनिक गरेको विदेशमा लगानी गर्ने व्यक्तिको सूचीमा जोशीको नाम पनि परेको छ । नेपालका व्यवसायी संजीवराज भण्डारीसँग जोशीलाई जोडिएको छ । जोशी न नेपालमा बसे, न त्यहाँ कमाए । अमेरिकामा अवसर देखे, कम्पनी खोले व्यवसायी बने । उनको स्टुडियो दुई वर्षअघि रिलिज भएको हलिउडको चर्चित फिल्म द लायन किंगमा संलग्न भएको थियो । उक्त फिल्मबाट जोशी चर्चित पनि भएका थिए । द वासिंटन पोष्टले जोशी र उनको कम्पनीको कामको प्रशंसा गर्दै समाचार पनि प्रकाशन गरेको थियो ।
अमेरिकामा फ्लोरिडादेखि हवाइका टापुसम्म नेपालीका व्यवसाय छन् । टेक्ससमा मात्र झण्डै एक हजार ग्यास स्टेशनमा नेपालीको लगानी भएको बताइन्छ । दुई÷चारवटा स्टोर हुने नेपाली सामान्य भइसके । ग्यास स्टेशनबाहेक आईब्रे थ्रेडिङ, रेष्टुरेष्ट, फास्टफूड, घरजग्गा किनबेच, होटललगायतमा नेपालीले लगानी गरेका छन् । यसका लागि नेपालीका नाममा अमेरिकामा हजारौँ कम्पनी भेटिन्छन् ।
अमेरिकामात्र होइन, खाडी मुलुक, मलेसिया, जापान, युरोपदेखि अष्ट्रेलियासम्म नेपालीका व्यवसाय छन् । उपेन्द्र महतो, शेष घले, भवन भट्ट, जीवा लामिछाने विदेशमा सफल व्यवसाय गर्दै आएका नेपाली हुन् । यसमा थुप्रै अरुको नाम पनि थप्न सकिन्छ । भवनले एक वर्षअघि सार्वजनिकरुपमा आफ्नो कम्पनीले विदेशमा वार्षिक झण्डै ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार गर्ने दाबी गरेका थिए । शेष अष्ट्रेलियाका धनीको १०० जना भित्रै पर्छन् । जीवा युरोपका विभिन्न देशमा होटल चलाउँछन् । यस क्रममा त्यहाँ उनका कयौँ कम्पनी र बैँकमा खाता हुने भए ।
रुसमा पढ्न जाँदा त्यहाँ कमाउने अवसर देखेर उपेन्द्र महतो व्यवसायी हुन पुगे । उनले कयौँ देशमा लगानी गरेका छन् । कम्पनी चलाइरहेका छन् । उनले चाहेको भए सायद धनीहरुको सूची बनाउन फोब्र्समा आउन सक्थे । महतोले नेपालमा पनि कम लगानी गरेका छैनन् । मेडीसिटी अस्पतालमा उनको ठूलो लगानी छ । नेपालमा बैँक, हाइड्रो, सञ्चारलगायतका क्षेत्रमा महतोले अरबौँ रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । विदेशमा कमाएको पैसा उनले नेपालमा लगेर लगानी गरेका हुन् । पैसा कानुनीरुपमा जहाँबाट सजिलो हुन्छ त्यहीँबाट लैजानुपर्ने हुन्छ । व्यवसायीले सजिलो र फाइदा खोज्नु सामान्य पनि हो । उपेन्द्रले त्यही गरे, जुन व्यवसायीहरुले गर्छन् ।
नेपालमा लगानी गर्न लागेका नेपाली व्यवसायीले हाँस्दै भने, मैले नेपालमा लगानीका लागि अमेरिकाबाट पैसा लैजानु थियो । यसका जानकारले भने पानामाबाट पठाउनुहोस् सजिलो हुन्छ, सस्तो पर्छ, मैले त्यहाँ सुझाव मानिन् नत्र मेरो नाम पनि आउने रहेछ ।
अमेरिकाको न्युयोर्कमा कानुन व्यवसाय गर्ने खगेन्द्र जिसी भन्छन्– ‘नेपाली व्यवसायी जसले विदेशमा व्यवसाय गर्छ उसको विदेशमा कम्पनी र बैँक खाता हुनु सामान्य हो । यसलाई गलतरुपमा चित्रण गर्नु वकवास हो ।’
नेपालमा २०२१ सालमा बनेको कानुनले विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । करिब १० वर्षअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री डा रामशरण महतद्वारा प्रस्तुत सरकारको बजेट वक्तव्यमा नेपालीलाई विदेशमा लगानी गर्न बाटो खुला गर्ने गरी कानुन, नियम ल्याउने घोषणा भएको थियो । यो बजेटलाई तत्कालीन संसद्ले स्वीकृत गरेको थियो । तर, यस अनुसार कानुन भने अहिलेसम्म आएको छैन ।
विदेशमा लगानी गर्ने नेपाली व्यवसायीको प्रश्न छः संसद्ले स्वीकृत गरेको बजेटअनुसार किन कानुन आएन ? यही थोत्रो कानुनका कारण विनोद चौधरीले डराइडराइ विदेशमा आफ्नो व्यवसाय विस्तार गरेका थिए । नेपालमा माओवादीको द्वन्द्वका कारण असुरक्षा, चन्दा आतंकले लगानी गर्ने वातावरण थिएन । यो बाध्यताले विनोद कानुन नभए पनि विदेशमा व्यवसाय गर्ने अवसर छोप्न पुगेका थिए । अहिले विनोद तेस्रो विश्व भनिने नेपालजस्ता गरिब देशबाट उदाएका बहुराष्ट्रिय उद्यमी भएका छन् । उनको आक्रामक व्यवसाय विस्तार गर्व गर्न लायक छ ।
अहिले विकसित देशका मात्र बहुराष्ट्रिय उद्यमी हुन्छन् भन्ने परम्परागत मान्यता गलत सावित भइसकेको छ । भारत, चीन, अफ्रिकालगायतबाट कयौँ बहुर्राष्ट्रिय उद्यमी उदाएका छन् । नेपालभन्दा पछि आर्थिक उदारीकरण सुरू गरेको भारतले आफ्ना व्यवसायीलाई बहुराष्ट्रिय बन्न अभिप्ररित गरिरहेको छ । चीन यसमा अझ आक्रामक छ । भारत र चीनका व्यवसायी युरोप, अमेरिका, अफ्रिका पुगिसकेका छन् । यसमा त्यहाँको सरकारको पनि सहयोग छ ।
जिसी भन्छन्– ‘अमेरिकामा पनि कयौँ कम्पनीले ट्याक्स हेभन भएका देशमा कम्पनी खोलेर कर बचाएका छन् । व्यवसायमा यो हुन्छ’, उनले भने, ‘रेमिट्यान्स व्यवसाय गर्ने नेपालको कम्पनीले विदेशमा कम्पनी खोल्यो, यो के असामान्य भयो र ?’ जिसीले प्रश्न गरे ।
खाडीमा व्यवसाय गरेका रामेश्वर शाहले आफ्नो फेसबुकमा लेखेका छन् ‘६० लाख गैरआवासीय नेपालीहरुको प्रवासमा परिवर्तित मुद्राका बैँक खाताहरु छन् । कतिपय खाताहरु दैनिक प्रयोजनका लागि छन् भने कतिपय नियमित बचत र व्यावसायिक लगानीका । ती सबै रकम कालो धन होइन । देशभित्र खरबौँ हसुर्नेलाई उन्मुक्ति दिँदै गर्दा बाहिर कमाएर राखेका केही अरबमा केको रोइलो ?
खोपकेको समाचारपछि व्यवसायी चन्द्र ढकालले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर भने, ‘स्वीस बैँकमा हाम्रो कुनै खाता र रकम मौज्दात भेटिए त्यो सरकारले जफत गरोस्, त्यस्तो गैरकानुनी काम गरेको फेला पारे हामीलाई दण्डित गरियोस् ।’
व्यवसायी ढकाल नेपालमा बैंकिङ प्रणालीमार्फत रेमिट्यान्स ल्याउने अग्रणी व्यवसायी हुन् । चन्द्रागिरी केवलकार, बैँकलगायतमा उनको लगानी छ । सात वटै प्रदेशमा होटल र व्यवसाय खोल्ने योजनामा उनी सक्रिय छन् । आफ्नो व्यवसायमा नेपाल भित्र र बाहिर उनले सयौँ नेपालीलाई रोजगारी दिलाएका छन् । अन्य नेपालका व्यवसायीले पनि यो हल्लाको प्रतिवाद गरेका छन् ।
विदेशमा नेपालीको कति लगानी भएको छ ? यसको अध्ययन भएको छैन । तर, करिब ३ लाख नेपाली समुदाय बस्ने अनुमान गरिएको अमेरिकामा मात्र झण्डै २०० अर्ब रुपैयाँ नेपालीले विभिन्न कम्पनी र व्यवसायमा लगानी गरेको अनुमान छ । यो बढ्दो क्रममा छ । यसरी व्यवसाय गर्ने एक÷दुई अपवादलाई छाडेर सबैले यहीँ कमाएर व्यवसाय विस्तार गरेका हुन् । गत आर्थिक वर्ष अमेरिकाबाट मात्र १७० अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स नेपाल गयो । यसमा विनयजस्ता अमेरिकाका व्यवसायीले पठाएको पैसाको हिस्सा उल्लेख्य छ । अमेरिकाबाट गएको पैसा घरजग्गा जोड्नलगायत विभिन्न व्यवसाय गर्न र व्यवसायमा लाग्ने आफन्त र साथीभाइलाई सहयोग गर्न लगानी भएको छ ।
नेपालको कुल जनसंख्यामध्ये करिब २० प्रतिशत नेपाल बाहिर रहेको अनुमान छ । नेपालीहरु विश्वका धेरै देशमा पुगेका छन् । गैरआवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद् ७५ भन्दा बढी देशमा गठन भएकाले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ । यसरी जाने नेपालीका नाममा विदेशमा हजारौँ बैँक खाता, कम्पनी र व्यवसाय छन् । ‘कसैले कर छलेर, भ्रष्टाचार गरेर नेपालबाट विदेशमा पैसा लग्यो, भने यो गलत हो, कारबाही गर्नुपर्छ’, जिसी भन्छन्, ‘तर, कसैले विदेशमा व्यवसाय गर्छ भने के को आपत्ति ?